Wararka - Xitaa haddii ay jiraan khataro, maqaar caddeynta ayaa caan ka ah sidii hore
Is caddeynta ama caddeynta waa mowduuc aad u muran badan. Waxay bixisaa macne soo jiidasho leh si loo hagaajiyo midabkaaga.
Waxaa jira siyaabo badan oo maqaarka looga fududeeyo. Kuwaas waxaa ka mid ah kareemada maqaarka gaarka ah iyo daaweynta laser. Sababtoo ah qiimaheeda oo hooseeya iyo nabadgelyadiisa sare, dad badan ayaa doorta kiriimyada maqaarka.
Haddii aad ka fiirsaneyso shey caddeeya, waxaa jira waxyaabo qaarkood oo aad u baahan tahay inaad marka hore ogaato. Maqaalkani wuxuu qeexayaa dhinacyada ugu muhiimsan, gaar ahaan maaddooyinka.
Iftiiminta maqaarku asal ahaan waxaa loola jeedaa adeegsiga daaweyn gaar ah ama walxo si loo hagaajiyo ama loo fududeeyo midabka maqaarka. Dadku waxay adeegsadaan ereyo kala duwan si ay ugu sifeeyaan, oo ay ka mid yihiin caddeynta, khafiifinta ama caddeynta maqaarka.
U soo gaarista maqaarka bini’aadamka arrimo badan ayaa u horseedi kara inuu noqdo caajis. Gabowga, wasakhda, boodhka, wasakhda, shucaaca ultraviolet iyo kiimikooyinka (oo ay ku jiraan kuwa ku jira waxyaabaha daryeelka maqaarka) ayaa dhaawici kara maqaarka.
Nafaqo darrada, xulashooyinka qaab nololeed ee aan caafimaad qabin iyo walbahaarka ayaa sidoo kale saameyn xun ku yeelan kara muuqaalka maqaarka.
Waxyaabahan kaladuwan waxay sababi karaan dhibaatooyin kala duwan, oo ay ku jiraan wareegyo madow, dhibco da ', nabarro finan ah iyo dhibco.
Dadku waxay ku tiirsan yihiin waxyaabaha la caddeeyo iyo daaweynta si loo xalliyo dhibaatooyinkaas. Waxay u isticmaalaan inay ku hagaajiyaan ama ku soo celiyaan midabka maqaarka.
Waxyaabaha lagu iftiimiyo maqaarka, waxaad isku waafajin kartaa aagagga maqaarku isku-buuqsan yahay iyo midabka maqaarka ku hareeraysan. Meelahaas waxaa ka mid ah astaamaha dhalashada, jiirarka, chloasma iyo qumanka.
Iftiiminta maqaarku waa ifafaale caalami ah, in kasta oo la soo warinayo in si weyn loo daneynayo maqaar-yareynta Afrika, Bariga Dhexe iyo Hindiya. Marka la gaaro 2013, waxaa la saadaalinayaa in sanadka 2018, suuqyada wax soo saarka maqaarka ee maqaarka caddeeya ay gaari doonaan ku dhowaad 20 bilyan oo doollarka Mareykanka ah.
Alaabooyinka iyo hababka daaweynta ayaa isticmaali kara habab kala duwan si kor loogu qaado midab siman oo caddaalad ah. Laakiin iftiimiyayaashu badanaa waxay ku shaqeeyaan faragelinta faragelinta wax soo saarka melanin ama gacan ka geysashada burburinta.
Melanin waa walaxda ugu weyn ee door ka ciyaareysa midabka maqaarka. Kani waa nooc ka mid ah polymerka madow. Waxaa jira dad badan oo leh maqaar madow.
Jirka bani'aadamku wuxuu soo saaraa midabkan iyada oo loo marayo habka wax soo saarka melanin. Saynisyahannadu waxay aqoonsadeen laba nooc oo waaweyn oo ah walaxda maqaarka iyo timaha, kuwaas oo kala ah: Eumelanin (madow ama bunni) iyo pheomelanin (jaalle ama casaan). Nooca gaarka ah ee maqaarka ayaa go'aamin doona codkiisa.
Iftiimiyayaal badan ayaa ka shaqeeya joojinta soo saarista midabbada. Waxay tan ku sameeyaan iyagoo yareynaya waxqabadka enzymes-yada qaarkood ee gacan ka geysanaya geeddi-socodka. Enzyme caan ku ah soo-saarista waa tyrosinase.
Jirkaaga wuxuu ku tiirsan yahay L-tyrosine si uu u sameeyo melanin. Talaabada ugu horeysa ee soosaarida melanin, tyrosinase waxay ubadashaa amino acidkaan L-Dopa. Brighteners waxay isku dayaan inay xakameeyaan muujinta, firfircoonida ama waxqabadka enzymes, taas oo ka hortageysa soo saarista midabada.
Qaar ka mid ah maaddooyinka kale ee ku jira waxyaabaha la caddeeyo ayaa kaa caawin kara qurxinta jirka. Waxay gacan ka geystaan ​​burburinta melanin-ka horey ugu jiray jirka.
Dad badan ayaa doorta waxyaabaha maqaarka caddeeya maxaa yeelay kuma qanacsana inay isticmaalaan waxyaabaha la isku qurxiyo si ay u helaan xitaa maqaarka maqaarka. Xitaa haddii ay awoodi karaan, waxay inta badan ka baqaan helitaanka daaweynta laser-ka.
Si kastaba ha noqotee, badeecadaha ujeedadoodu tahay in lagu gaaro midab caddaalad ah ayaa badanaa la kulma kufsi xun. Sida laga soo xigtay warbixinnada, waxay sababaan dhibaatooyin kale oo kala duwan oo laga yaabo inay ka dhigaan kuwo aan u qalmin in la isticmaalo gabi ahaanba.
Waxaa la sheegay in badeecooyinkan badankood ay ku jiraan waxyaabo waxyeelo leh. Xaaladaha qaarkood, waxaa la ogaaday inay ku jiraan kiimikooyin sun ah oo sababi kara dhibaatooyinka maqaarka, oo ay ku jiraan kansarku.
Dadku badanaa waxay adeegsadaan ereyga "bleaching" markay ka hadlayaan arrimahan badbaadada. Sababtaas awgeed, shirkaduhu sida caadiga ah way iska ilaaliyaan inay u isticmaalaan si ay u sharxaan wax soo saarkooda.
Isticmaalka maaddooyinka waxyeelada leh sannadihii la soo dhaafay ayaa ka dhigtay kareemada wax lagu caddeeyo in laga mamnuuco waddamada qaarkood.
Si buuxda uma fahmin sababta ay soosaarayaasha qaarkood u doortaan maaddadan sunta ah. Marka la eego helitaanka beddeli badbaado ama dabiici ah. Waxaa laga yaabaa in tani ay sabab u tahay rabitaanka faa'iidooyinka sare.
Hoos waxaan ku falanqeyneynaa maaddooyinka halista ah qaarkood, markii aad aragto, waa inaad isla markiiba ku shubtaa kareem caddeeya. Waxa kale oo aad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan maaddooyinka nabdoon ee ay tahay in alaabada ugu habboon ay lahaato.
Tani waa maado aad caan u ah oo soosaarayaasha badanaa ku daraan cuntada. Hadda, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa ka warqaba halisteeda, taas oo keentay in shirkadaha qaar ay u adeegsadaan sharraxaad xariif ah tan, sida meerkurida, mercuric ammonia ama meerkuriga chloride.
Mercury waxaa loo isticmaali jiray maqaarka caddeynta muddo tobanaan sano ah. Marka la mariyo maqaarka, waxay awood u leedahay inay hoos u dhigto isku-darka melanin, sidaa darteed aad ayaa loo amaanaa. Si loo yareeyo kharashka macaamil soo-saaraha, qiimaha waa hooseeya oo si fudud loo heli karo.
Tan iyo markaas, dalal / gobollo badan (horaantii 1970-yadii Yurub) waxay mamnuuceen adeegsiga badeecadan si loo caddeeyo maqaarka. Maadadan waa mamnuuc oo waxaa lagu sifeeyay inay tahay sun ka jirta Mareykanka.
Meerkuri waxay ku sii jiri kartaa maqaarka muddo dheer, markaa waxay sababi kartaa dhibaatooyin kale. Waxay sababi kartaa maqaarka oo midab doorsooma iyo nabarro aan loo baahnayn. Waxa kale oo jira warbixino sheegaya inay saamayn ku yeelato shaqada maskaxda oo ay u keento dhaawac kelyaha ah. Marka ay isticmaalaan haweenka uurka leh ama hooyooyinka naaska nuujinaya, waxay sidoo kale u keeni kartaa cudurada maskaxda carruurta
Kani waa mid ka mid ah wakiilada iftiinka maqaarka ee ka caawiya qurxinta jirka. Waxaa guud ahaan lagu taliyaa in dadka qaba vitiligo ay door bidaan inay isticmaalaan kareemada ama xalalka la mariyo ee ay ku jiraan benzophenone. Cudurkan waxaa lagu gartaa aagagga iftiinka iyo mugdiga ah ee maqaarka. Isku-darka ayaa ka caawiya yareynta midabka maqaarka isla markaana sameeya midabka maqaarka xitaa.
Laakiin waxay burburin kartaa melanocytes waxayna soo saari kartaa melanosomes loo baahan yahay isku-darka melanin. Sidaa darteed, isticmaalkeedu wuxuu sababi karaa midab joogto ah ama aan dib loo noqon karin.
Marka laga reebo vitiligo, dhakhaatiirtu kuma talinayaan isticmaalka monobenzophenone xaalado kale oo kasta. Laakiin waad la yaabi doontaa inaad ogaato in shirkadaha qaar ay ku daraan waxyaabaha la isku qurxiyo ee caadiga ah. Dhibaatooyinka ka dhalan kara adeegsiga waxyaabaha noocaas ah waxaa ka mid ah midabbo aan sinnayn iyo xasaasiyadda qorraxda oo kordha.
Maaddada iftiiminta maqaarku waa mid dhib badan, sidaa darteed isticmaalkeeda waxay u yeelan kartaa saameyn aan la filayn dadka kale. Waxaa la sheegay in markii la isticmaalo, ay sababi karto midabbadka dadka kale kaliya taabashada maqaarka.
Ma la yaabtay? Waxaa laga yaabaa inaadan horay u aqoonin in steroids ay ku jiri karaan alaab caddeeya. Laakiin way awoodaan.
Steroids-ka ayaa kaa caawin kara in maqaarka loo caddeeyo siyaabo kala duwan. Midkood wuxuu la xiriiraa sida ay u yareeyaan howlaha melanocytes. Laakiin sidoo kale waxay yareyn karaan wareegga unugyada maqaarka dabiiciga ah.
Si kastaba ha noqotee, waa dhibaatada ugu weyn in walxahan muranku ka jiro aan lagu darin kareemka caddeeya. Cambaarta iyo cudurka psoriasis waa laba cudur oo dhakhaatiirta maqaarka ay badanaa u isticmaalaan inay ku daweeyaan. Dhibaatada dhabta ah waa isticmaalka muddada-dheer.
Steroids, oo ay ku jiraan corticosteroids, ayaa si gaar ah loogu isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada maqaarka ee bararsan. Rijeeto ayaa sidoo kale la soo saaraa, taas oo macnaheedu yahay inaad ka fiicnaan laheyd inaadan ku helin waxyaabaha la isku qurxiyo ee caadiga ah. Isticmaalka muddada-dheer ee iyaga ayaa yareyn kara dhaawaca joogtada ah ee maqaarka.
Waxyaabo badan oo daryeelka maqaarka ah waxay ka kooban yihiin saliidda macdanta. Soo-saaraha ayaa u adeegsada inuu ka caawiyo qoynta maqaarka. Sidoo kale way ka jaban tahay-saliidaha lagama maarmaanka ah ee dabiiciga ah.
Si kastaba ha noqotee, dadku waxay ka walwalayeen awoodda ay ka kooban maaddadan u leedahay inay dhibaato u keento maqaarka. Saliida macdanta ayaa xirmi karta daloolada maqaarkaaga, taasoo adkeyneysa ka saarida walxaha waxyeelada leh. Sidaa darteed, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin sida finanka iyo finanka. Waxaa kasii daran, maaddada ayaa loo maleynayaa inay tahay kansar.
Xaqiiqdii waa inaadan ka helin faa'iidooyinka iftiinka maqaarka tan. Parabens waa koox ka mid ah waxyaabaha ilaaliya. Soo-saareyaashu badanaa waxay u isticmaalaan inay ku dheereeyaan cimri-dhererka waxyaabaha la isku qurxiyo.
Dhibaatooyinka ay maaddadani sababi karto waxaa ka mid ah faragelinta nidaamkaaga endocrine iyo taranka. Waxaa sidoo kale la ogaaday inay kordhinayso halista kansarka.
Halkan, waxaad ku leedahay waxyaabo aad u caan ah oo ku saabsan alaabada daryeelka maqaarka. Hydroquinone waa dawo ka hortageysa isku-darka melanin-ka iyadoo la joojinayo tyrosinase. Tani waa mid waxtar badan. Sidaa darteed, waxaa badanaa laga helaa kareemo badan oo caddeeya.
Midkani maaha mid cabsi badan sida maaddooyinka kale ee waxyeellada leh. Tani waa sababta oo ah khubarada ayaa mararka qaarkood kugula taliya, gaar ahaan nooca fiirsashada 2% (ama ka hooseeya). Laakiin sidee ku ogaan kartaa awoodda mid ka mid ah kareemada caddeeya, gaar ahaan haddii aan la sheegin?
Marka lagu daro xoog, isticmaalka muddada-dheer ee hydroquinone wuxuu kaloo kordhiyaa halista waxyeellooyinka. Waxay sababi kartaa maqaarka oo midab doorsooma, haddii ay taasi dhacdo wuxuu noqon karaa mid joogto ah. Tani waxay sidoo kale si xun u saameyn kartaa enzymes qaarkood oo door muhiim ah ka ciyaara jirka aadanaha.
Alkolo, dioxane iyo phthalates waa maaddooyin kale oo waxyeelo leh oo ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid kareemada maqaarkaaga iftiimiya si looga hortago dhibco madow.
Markaad kahadleyso wax dabiici ah, wakiilada hillaaca maqaarka ee nabdoon, liistadu ma dhameystirnaeyso haddii aysan ku jirin soosaarida miraha liinta (sida liinta iyo liinta). Kuwani waa faa'iido, badanaa sababtoo ah fitamiin C-ga ay ku badan yihiin. Waxaa la rumeysan yahay in xarunta ay leedahay waxyaabo maqaar caddeeya.
Si kastaba ha noqotee, waa wax caadi ah in dadku ay ka hadlaan fitamiin C si ballaaran marka loo eego aragtida faa'iidooyinka maqaarka. Xarunta waxay leedahay astaamo antioxidant waxayna kaa caawin kartaa kahortaga astaamaha gabowga, sida khadadka wanaagsan iyo duuduubnaanta.
Soosaarida liinta ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay gacan ka geysato soo saarista kolajka, taas oo ah sirta ka dambeysa maqaarka adag, maqaarka dhalinyarada. Waxay hagaajin karaan maqaarka maqaarka waxayna kobcin karaan koritaanka unugyada cusub.
Maadadan ayaa sidoo kale loo yaqaan fitamiin B3 waxaana badanaa laga helaa waxyaabaha maqaarka tayo sare leh. Mid ka mid ah sababaha tani waa saameynta iftiinka maqaarka. Waxay ka caawisaa yareynta wax soo saarka melanin.
Nicotinamide waxay soo saartaa saameyn antioxidant waxayna leedahay astaamo anti-bararka. Waxaad ogaan doontaa inay xajisan tahay qoyaanka waxayna ka caawineysaa inuu maqaarku noqdo mid jilicsan oo jilicsan. Fiitamiinnada sidoo kale waxay gacan ka geystaan ​​nidaaminta saliidda maqaarka.
Markii loo isticmaalo N-acetylglucosamine, waxtarka fiitamiinkan waxaa la rumeysan yahay in la xoojinayo.
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay in dadka qaar kugula talinayaan inaad isticmaasho miraha (sida mulberry, bearberry ama blueberry) si aad u caddeyso maqaarkaaga. Tan waxa ugu wacan joogitaanka dhisme loo yaqaan arbutin, oo sidoo kale loo yaqaan hydroquinone-β-D-glucoside.
Arbutin wuxuu caawiyaa yareynta soo saarida melanin ee jirka. Waxay leedahay laba isomar: α iyo β. Isomer-ka 'alpha isomer' waa mid xasiloon oo ku habboon qafiifinta maqaarka.
Maaddadan dabiiciga ah ayaa loo tixgeliyaa inay beddel ammaan ah u tahay qurxinta caanka ah ee alaabada badankeeda. Marka tyrosinase la joojinayo, qaabka saafiga ah ayaa ugu waxtar badan.
Wax walba oo ereyga “aashito” leh waxyeello kuma aha. Qaar badan oo ka mid ah waxyaalahan waa kuwo dabiici ah oo faa'iido leh. Marka ha ka baqin.
Azelaic acid waa qayb ka mid ah shaciirka iyo badarka kale, waxaana badanaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo finanka iyo rosacea. PH-keedu waa isku mid sida maqaarka, markaa aad buu ammaan u yahay.
Baarayaasha waxay ogaadeen in maaddadan ay sidoo kale kaa caawin karto caddeynta maqaarka. Daraasaduhu waxay muujiyeen inay tahay hab wax ku ool ah oo lagu daaweeyo midabka maqaarka. Waxay kaa caawin kartaa kahortaga soosaarka melanin.
Maadadan loo yaqaan 'tripeptide molecule' waa qayb caan ah oo ka hortagga gabowga oo maqaarka ka ilaalisa waxyeellada oksida. Iftiiminta maqaarku waa mid ka mid ah faa'iidooyinka badan ee la xiriira.
Glutathione sidoo kale waxay leedahay awood ay kaga hortagto waxyeelada qoraxda. Cadaynta maqaarka waxay caadiyan yareysaa awoodaada qorraxda ee dabiiciga ah. Laakiin maaddadani waxay leedahay astaamaha anti-oxidant-ka waxayna kaa ilaalin kartaa fallaaraha UV.
Si kastaba ha noqotee, khubaradu waxay yiraahdaan in meykuyuulku leeyahay waxtarka nuugista hooseeya marka gudaha laga isticmaalo. Hal dariiqo oo lagu xallin karo dhibaatadan waa iyada oo loo isticmaalo iyada oo lagu daro daawooyinka kale (sida fitamiin C).
Sidaan wada ognahay, Shiinaha ayaa u adeegsada noocyada kala duwan ee xaaladaha maqaarka. Daraasaduhu waxay muujiyeen in waxyaalaha laga soosaaray dhirta loo yaqaan "licorice plant", gaar ahaan 'galapudine', ay leeyihiin awood ay ku iftiimiyaan maqaarka.
Waxyaabahan ayaa la aaminsan yahay inay siyaabo kala duwan u iftiimiyaan maqaarka. Laakiin badanaa waxay ku shaqeeyaan iyaga oo xakameynaya waxqabadka tyrosinase-suurta galnimada ilaa 50%.
Daraasaduhu waxay muujiyeen in sababta oo ah waxay xakameyn kartaa isku-darka melanin, inay waxtar u yeelan karto maqaarka. Tani waxay ku sameysaa iyada oo xannibeysa waxqabadka tyrosinase.
Budada Crystal waa wax soo saar halsano bariis xumaaday, taas oo aad ugu haboon maqaarka waxyeelo iyo xasaasiga ah. Badanaa waxaa la helaa inta lagu jiro soo saarista khamriga bariiska Japan. Waxaa la sheegay in Jabbaanku ay muddo dheer u isticmaali jireen daaweynta maqaarka midabbabka.
Waa inaad ogaataa inay ka duwan tahay tan xasilloon ee kojic acid dipalmitate ee ay degeen shirkadaha qaar. In kasta oo maaddooyinka kale ay sidoo kale kaa caawin karaan, haddana waxtar uma leh sida kojic acid.
Kani waa mid ka mid ah labada alpha hydroxy acids (AHA) ee la bartay kan ugu badan - kan kalena waa lactic acid. Cabirkooda maadada darteed, aad baa loogu qaddariyaa awooddooda ay ku dhex galaan lakabka sare ee maqaarka.
Dad badan ayaa ogaada in glycolic acid uu yahay mid jirka ka baxa. Waxay ka caawisaa kor u qaadida awooda cusbooneysiinta unugyada waxayna ka saartaa unugyada maqaarka ee aan caafimaadka qabin ama dhintay. Laakiin tani way ka badan tahay intaas.
Maaddadan, waxaad sidoo kale yeelan kartaa maqaar dhalaalaya. Daraasaduhu waxay muujiyeen inay kaa caawin karto inaad yareyso soo saarista melanin ee jirkaaga, taas oo kor u qaadaysa midabka maqaarka.
In kasta oo caddeynta ama caddeynta ay noqon karto mowduuc muran ka taagan yahay, haddana qof walbaa ma awoodi karo. Dadka qaba dhibaatooyinka maqaarka (sida dhibco da ', dhibco, goolal madoow iyo astaamaha) hubaal kama baqi doonaan warbixinno xun oo ku saabsan dhibaatadan.
Xaqiiqdu waxay tahay in dadku guud ahaan aysan ogoleyn maqaarka oo cadeeya sababtoo ah suurtagalnimada falcelin xun. Sharaxaadda ugu weyn ee dhibaatada noocan ah ayaa ah in soo-saaraha uu adeegsado maaddooyin khatar ah, oo suurtagal ah inuu lacag ku helo. Maaddaama macaamiisha ay sii kordhayaan, isbeddelladan waxyeellada leh hadda way isbeddelayaan.
Sida aad kor ku arki karto, waxaa jira maaddooyin dabiici ah oo ammaan ah, oo jirkaaga ka dhigi kara mid dhalaalaya oo caafimaad qaba. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka dhex raadiso badeecadan alaabooyinka aad qorsheyneyso inaad iibsato. Kahor iibsiga, fadlan ku samee cilmi baaris ku saabsan maaddooyinka kale ee aynaan halkan ku xusin.
Kukiyada loo baahan yahay ayaa gabi ahaanba muhiim u ah hawlgalka caadiga ah ee bogga. Qaybtani waxay ka kooban tahay oo keliya cookies si loo hubiyo howlaha aasaasiga ah iyo astaamaha amniga ee bogga. Kukiyadaas ma keydiyaan wax macluumaad shakhsi ah.